Dowladda oo magacowday gudidii farsamada shirka Dhuusamareeb
July 30, 2020 Mahad Jama 10
MUQDISHO(P-TIMES)- Golaha wasiirrada ayaa lagu ansixiyay xubnaha guddiga farsamada heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee ka baaraan degaya talooyinka la xiriiri hannaanka iyo habsami u socodka doorashootinka dalka.
Qodobka 5-aad ee warmurtiyeedka shirka Dhuusamareeb 2 oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad gobaleedyada ayaa lagu shaaciyay samaynta guddi farsamo oo ka baaraan dega talooyin la xariira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka.
Xubnaha guddiga oo goluhu sida aqlabiyadda leh ku meel mariyey ayaa ka kooban 16 xuboon oo lix kamid ah ay ka imaanayaan dowladda federaalka iyo maamulka gobalka Banaadir iyo 10 xubnood oo dowlad gobaleedhada min laba uga imaanaya.
Whats the point? Farmaajo heshiiskii guddiga farsamo laysku raacay waa ka baxay. Banaadir oon xitaa maamul goboleed aheyn baa xisaabta lagu soo daray oo waxaana la siiyay 4 xubnood out of the 6 agreed for the federal government. How can this be justified? War dadkaan villa wardhiigley balan ma lahan so no need to waste any more time with the buggers.
Autistic Xarmaajo ceeb iyo fadeexad buu ka qaadey kursiga… Wuu fiigsan yahay… Waxaa god ku ridey Fahad Yasin..
Wasiirro xukuumaddoodii dhacday iyo ra’iisalwasaare siihaye ah ayaa waxay ka gaarsiiyeen oo sii boobayaan guddiyo iyo heshiisyo saddex sano iyo bar ulakac loo dayacay. Xitaa inta aan ra’iisalwasaare cusub imaan ayaa laga sii gaarsiinayaa. Heshiisyadaas iyo guddiyadaas qaarkood sow uma baahna in falanqeeyo oo uu ka doodo Baarlamaan ku-sheeggu? Yaa garanaya waxa ku dhex duugan heshiiska lala galay Itoobiya?
Goormaase laga wadahadlay in Xamar loo aqoonsado dowlad goboleed la siman kuwa hadda jira? Kuraasta Aqalka Sare ee Xamar khasabka iyo sharcidarrada lagu marsiiyey kama turjumayso maqaamkeeda (status).
Ninka warfaafinta u qaabbilsan Farmaajo, isagoo wasiir sheeganaya ayuu isticmaalaya erayo dastuurka khilaafsan. Matalan, dowlad goboleedyada (federal states), wuxuu ugu yeeray maamul goboleed (regional adminstration). Waa labo macne oo aad u kala duwan, waana eraybixin hannaanka federalka lagu diiddan yahay; dowlad goboleedyadu waa inay diidaan in eraybixinta caynkaas la isticmaalo.
Sidaan mar hore u sheegay, nimankan siyaasiinta ah ee Gobollada Waqooyi kasoo jeeda waa calooshood ushaqeystayaal meesha u jooga lacag iyo tabcasho, danna kama laha, daacadna uma aha in dowladnimada Soomaaliyeed cagadhigato iyo kale. Maalinkii ay fashilantana waxay ku noqonayaan Hargeysa, Burco, iyo Boorama iyagoo jeebabka booli uga buuxdo.
Burcadnimadii iyo boobkii ahaa saan wax u rabo kaliya baa saxa waa dhamaatay, Mr Farmaajaa soo afjaray. Ama hala caytomo ama hala ooyo. Qof walba wuxuu ahaa banaankaa la keenay. Madaxwaynaha madaxweynayaasha maamul goboleedyada baa ka shaqeynaya wixii iswaala Farmaajo iyo madaxda sare intaan la gaarin. Wa bilaahi towfiiq
DANI WAA INUU KA AMARQAATAA MR QOOQOOR. QOORQOORNA WAA MADAWEYNHAHA MADAXWEYNAYAASHA DAWLAD GOBOLEEDYADA. DANI YAANU IS WAREERIN, DADKANA WAREERIN. SHIKII DHUUSOMAREEB BAA CARDKA LAGA MARSDAY, IMIKA WAX CREDIT AH UGUM JIRAAN
@ Runlow, Qofkii maqaamkiisa iska hoos mariyaa saas baa u dambaysa. Md Deni asagaa halkaas isgeeyey. Inuu Maamuladii hada la dhisay ka hoos maro. NASIIB DARO WEYN DHEH.
Farmaajo waxa uu gar ku halay markuu yidhi Baarlamaanka aad doorateen ayaa sharciga doorashada ansixiyay anigu kama hor iman karo baarlamaanka aad doorateen , anigu ma ihi kagii tali waa la doortay. 5 gudoomiye gobol aniga waxba iima yeedhin karaan.
Qoor qoor , waa ina farmaajo , waa kooxda nabad & Nolol isgaa meesha keensaday . kan DENi wuu meel cidla ah ayuu ka qaylinayaa.
Ujeedku waxa uu yahay , waa in MDX Farmaajo loogu daro 2 sanadood. ma ha in uu isagu doonayo in xilka loo kordhiyo, nidaamka dawliga ayaa ayaa sidaa qaba.. nidaamka dawliga ah ma ogala meel banaan ( Vacuum) hadii kale Alshabaab ayaa qabsanaysa Villa Wardhiiglay.
Madaxweyne waxaa bedala madaxweyne kale oo la soo doortay. Farmaajo waa in loogu daro 2 sanadood si uu dalka u gaadhsiiyo doorasho qof iyo cod ah. looma baahna doorsho dadban waa hogii hore , odoy xun oo tuug ah leh anigaa reer hebel xukuma inta uu jeebka lacag ka buuxsado yidhaahdo anigaa waxdoortay kaligay